Ilwareed.com » Maxaad ka ka taqaan Xabsiga ugu Nolosha Wanaagsan Dunida iyo Halka uu ku yaalo(Daawo Sawirada Raaxada Xabsigaasi)
Dr. C/weli Gaas oo soo dhawayn ballaaran loogu sameeyay Degmada Badhan (Daawo Sawirada) Dowladda Soomaaliya oo saxiixday buuga tacsida ee loo firay Nelson Mandela + sawirro Dab Geystay Qasaaro Nafeed Iyo Mid Hantiyeed Oo Maanta Ka Kacay Deegaan Hoos Yimaada Degmada Garbahaarey Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo laga hirgeliyay baledweyne Ciidan ka wada tirsan dowladda oo maanta ku dagaalamay degmada dayniile SOMALI LINKS
Maxaad ka ka taqaan Xabsiga ugu Nolosha Wanaagsan Dunida iyo Halka uu ku yaalo(Daawo Sawirada Raaxada Xabsigaasi)
November 27, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Xabsigaan waxaa la dhisay sanadaan gaba gabada ah ee 2012-ka Waxaana lagu magacaabaa HALDANE oo ku yaala wadanka Norway waxaan uu siwayn uga duwan yahay Xabsiyada ka jira inta badan caalamka , waxaan uu leeyahay Qalab diyaarsan oo ay maxaabiistu ku madadaalaan inta ay xabsiga ku jiraan.
Waxyaabaha uu leeyahay Xabsigan Cusub ayaa waxaa ka mida Talefashin, Talaajad, Qalabka Muusikada, gtaroomo lagu ciyaaro ,dukaamo iyo waxyaabo kale Dowlada dalkaasi Norway ugu tala gasahy maxaabiista ku xiran Xabsigaasi .
Waxaa sidoo kale Dowlada Norwey Maxaabiista ku jirta Xabsiga HALDANE mid kasta oo ka mida u qoondeesay in uu qaato lacag dhan 185 -doolar, waxaan uu qaadaa xabsiga 250 maxbnus, waxaana ka shaqeeya 340 Shaqaale ah.
Dadka ku xiran looma moodo in ay maxaabiis yahiin waxaana ay ku socdaan dhul kayn ah , intaasina ay sii dheertahay in ruux kasta oo ka mida Maxaabiista uu maalinkii helayo hal saac iyo bar uu ku cayaaro kubada cagta iyo kubadaha kale uu xiiseeyo.
Nolosha ay maxaabiista ku nool yahiin ayaa u eg mid caadi ah oo aysan xataa haysan qaar ka mida dadka xuriyada ku nool meelo ka mida dunida ,waxaana loo aqoonsaday Xabsigan midka ugu nolosha fiican Xabsiyada Dunida.
Dowladda Soomaaliya oo ka codsatay Ururka iskaashiga Islaamka howlgelinta Sanduuqa kaalmada SoomaaliyaDecember 10, 2013
“Daawo sawirrada” Madaxweynaha Puntland Oo Maanta Ku Laabatay GaroweDecember 10, 2013
“Daawo swirrada” Wasiirka Arrimaha dibadda Oo Kulan La Yeelatay Safiirka Cusub Ee Dowladda MasarDecember 10, 2013
Taliyihii ciidanka Ilaalada ee wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka jubba oo caawa lagu dilay magaalada kismaayoDecember 10, 2013